I-China Quality And Wholesale EV Ishaja Yomkhiqizi - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula Lemoto > Ishaja ye-EV
Ishaja ephathekayo ye-EV
1.Ukwethulwa Komkhiqizo weIshaja ephathekayo ye-EV
LokhuIshaja ephathekayo ye-EVkwakuyinto yakamuva esungulwe esiteshini sokushaja imoto eyi-16A eshaja ephathekayo yezimoto zikagesi i-CTC Connexions ephathekayo ye-EV Ishaja ingasetshenziswa kulezi zimoto ezijwayelekile:
I-Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Vollkswagen e-Up, Volkswagen e-Golf, Volvo V60 PHEV, Tesla S / X, Chevrolet Volt, Citroen C-Zero, Fisker Karma, BYD, Ford Focus Electric, Ford C-Max Energi, Mia, Mia Electric Van, Mitsubishi-I Miev, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, INissan Leaf, Peugeot Ion, Renault Fluence, Renault Kangoo, Toyota Prius, Vauxhall Ampera.
2.UmkhiqizoIpharamitha (Ukucaciswa) kwe-Ishaja ephathekayo ye-EV
Ukushaja kwezinga 1
Ukushaja kwezinga 2
Max AC Ukushaja yamanje
Max Amandla lokukhipha
3.UmkhiqizoIsici Nokusetshenziswa kweIshaja ephathekayo ye-EV
1.Ukusebenza Kokuvikela Okuhle Kakhulu
Ukuvikelwa 3.Leakage (kabusha alulame)
5.Under-voltage Ukuvikelwa (self-ngibheka alulame)
4.UmkhiqizoDetails of the Ishaja ephathekayo ye-EV
I-STANDARD 120V (NEMA 5-15) ADAPTER: Kwesinye isikhathi, amazinga we-CTC Connexions level 2 EV ashaja（NEMA6-20 Plug） egalaji lakho akuyona inketho. Yingakho sidale isethi yokushaja ye-EV efaka ikhebula le-adaptha ye-Level 1 ehlangana nendawo evamile endlini yakho. I-adaptha yamamitha amathathu ubude ikuvumela ukuthi ukhokhise imoto yakho kagesi nge-plug ejwayelekile engu-120V (NEMA 5-15).
I-VERSATILE VEHICLE COMPATABILITY: Ama-plugs ahambisana nawo wonke ama-automaker amakhulu we-EV kanye nemithombo yamandla eminingi: iDryer, uhlobo lwe-RV noma indawo ejwayelekile yodonga ene-adapters.
IJubane le-3.86 KW / H ELISHA ELISHA: Ngokushaja kwezinga 2, izimoto eziningi ezisebenza ngogesi zizokhokhisa kuze kufike kumamayela ayi-11 ngehora. Izinga lethu elingu-2 EVSE lokushaja lishesha lifike ku-3x ngokushesha kuneshaja yangempela yemoto yakho, okusho ukuthi ungachitha isikhathi esiningi uphuma ubumnandi nokuzijabulisa nesikhathi esincane ukulinda.
UKUVIKELWA KWEZININGI: I-EVSE inikeza ubufakazi bombani, ukuvikelwa kokuvuza, ukuvikelwa kwamandla kagesi, ukuvikela ukushisa ngokweqile, ukuvikela ngokweqile, isilinganiso samanzi se-IP65, ukumelana nomlilo we-UL94V-0 ukukala ukuphepha kwakho. Ibhokisi lokulawula elinezinkomba ze-LED likusiza ukuthi ufunde ngesimo sokushaja.
OSEBENZELELA NGAPHAMBI KOKUTHENGISWA: Ithimba lezinsizakalo zamakhasimende lasendaweni linikela ngosizo lobuchwepheshe olungenasidingo, kanye newaranti yezinyanga eziyi-12. Uma kukhona okungakwenelisi ngokuphelele, mane usithinte futhi sizokulungisa!
5.UmkhiqizoQualification of the Ishaja ephathekayo ye-EV
Ipulagi yokushaja ihlangabezana ne-SAE J1772 2010 ejwayelekile
2.Power plug ukuhlangabezana NEMA 6-20 ejwayelekile
Ibhokisi le-4.Control lihlangabezana nomgomo wokulawula we-SAE J1772 2010
5.Charger Cord Length: 25 feet for EV Plug to Plug (Ububanzi: 0.472 inches)
6.Ihhuku nedokodo lifakiwe.
Ukusebenza Kokuvikela Okuhle Kakhulu
· Ibanga lokuvikelwa IP65
Ukuvikelwa kokuvuza (ukuqala kabusha ukuthola kabusha)
· Ukuvikelwa kwamandla amaningi
· Ukuvikelwa ngaphansi kwamandla kagesi (ukuzihlola ngokwakho)
· Ukuvikelwa kombani
6.Deliver, Shipping Futhi Ukukhonza weIshaja ephathekayo ye-EV
Isikhathi esiholayo:Izinsuku eziyi-15 nge-1KIshaja ephathekayo ye-EV
1.Q: Ngingakwazi ukukhokhisa esitolo sami se-110V? futhi yini i-voltage yokukhipha?
LokhuIshaja ephathekayo ye-EV has an adapter that you can use for either 110V or 220V (the small cord). these cords do not change the voltage, they only monitor for faults and send what ever voltage the unit is plugged into, through to the car.
2.Q: Ngabe ishaja esezingeni le-1-2 ene-nema 6-20 plug charge nge-16 amp rate nge-120v lapho iguqulelwe ku-nema 5-20r noma nema tt-30r?
A: Ku-120V ifayela le-Ishaja ephathekayo ye-EVkubiza ngo-1/2 isilinganiso sama-Volts angu-240
Ukubalwa kwe-KVA noma i-KW kuncike kuwo womabili ama-amps nama-volts.
Ngakho-ke uma usebenzisa le mali ku-240V, iyishaja engu-3.6 KW kanti ku-120V iyi-1.8 KW. Kuwo womabili amandla we-amp draw angaba phezulu kuma-16 AMPS.
Amathegi ashisayo: Ishaja ye-EV, China, Ikhwalithi, Isitolo esidayisa yonke impahla, Umkhiqizi